မျက်နှာ အသားအရည် တင်းရင်းဖို့ ဂရုစိုက်ကြစို့... - SANTHITSA
မျက်နှာ အသားအရည် တင်းရင်းဖို့ ဂရုစိုက်ကြစို့…
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူအတော်များများဟာ မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ အမှူမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေထိုင်ခြင်းများနဲ့ နေထိုင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ အခါကျမှ မိမိရဲ့အနေအထိုင် မဆင်ချင်မူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အလှဖျက် ဆိုးကျိုးတွေကို ရရှိလာပါမှ နောင်တ ရနေတတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
အသက်အရွယ် ရလာသည့်တိုင် သင့် မျက်နှာပြင် အရေပြားများ တင်းတင်း ရင်းရင်းနဲ့ နုပျိုလှပ နေချင်ပါသလား ???
ဒါဆိုရင် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်… ပြောပြ ပေးဖို့က စာရေးသူရဲ့ တာဝန်… လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့က စာဖတ်သူရဲ့ တာဝန်ပါ။
အရေပြား တွန့်ခြင်းနဲ့ ”ချင်း” အာနိသင်
ချင်းကို မျက်နှာပြင် အရေးအကြောင်းများ သက်သာ ပျောက်ကင်းရန် ချင်း မျက်နှာဖုံး ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းနဲ့အတူ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေကတော့ နာနတ်သီး အရည် ၊ ကြက်ဥ အကာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နာနတ်သီး အရည်ကို ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း ခြစ်ထားသည့် ချင်း (ဂျင်း) ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း
ကြက်ဥတစ်လုံး၏ အကာရည်၊ ပျားရည် လက်ဘက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ကြိတ်စက်ဖြင့် ညက်ညက်ကလေး ဖြစ်သွားစေရန် ကြိတ်ချေမွှေပေးပါ။ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်ခန့် ကြာအောင် ကြိတ်လိုက်သည့်အခါ အားလုံး ရောနှော ကြေညက်သွားပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက် ဤကြိတ်ချေထားသည့် အရည် ပျစ်ပျစ်ကို လက်ဖြင့်ယူ၍ မျက်နှာပေါ်သို့ တင်ပါ။ မျက်နှာပြင်တွင် ပွတ်သုတ်လိမ်းပြီး မျက်နှာပြင်အား လက်ချောင်းလေးများဖြင့် စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန် လှည့်ပတ်ပြီး ခပ်ဖွဖွ နှိပ်နယ်ပါ။
အရေးအကြောင်း အဖြစ်များသည့် နေရာသို့ ပိုမို၍ အလေးထား ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ထို့နောက် မျက်နှာဖုံးသဘွယ် တင်ပြီး ဆယ့်ငါးမိနစ် မိနစ်နှစ်ဆယ်ကြာ ထားပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေနွေးနွေးထဲမှာ စိမ်ထားတဲ့ ပိတ်စနဲ့ မျက်နှာပေါ်ရှိ မျက်နှာဖုံးကို စင်သွားအောင် သုတ်ဖယ်ပေးပါ။
ဤကဲ့သို့ နေ့စဉ် မျက်နှာဖုံးကို ဆယ့်ငါးမိနစ် မိနစ်နှစ်ဆယ်ကြာ ထားခြင်းကို ၇ ရက်ခန့် ဆက်လုပ်ပေးပါ။ ၅ ပတ်မှ ၆ ပတ်အတွင်း အကျိုးထူးကို သိသိသာသာ မြင်တွေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းမှာပါဝင်တဲ့ ထူးခြားသော အဆီများ၊ shoadနှင့် gingerol အင်ဇိုင်းများ၊ ဗီတာမင် A, C, E မျာ၊း သွေးလည်ပတ်မှူကို အားဖြည့်ပေးသည့် ကိုလာဂျင်နှင့် elastin ထုတ်လုပ်မှူကို အားကောင်းစေသည့် သံဓ်ာနှင့် မဂ္ဂနီစီယမ် သတ္ထုဓာတ်များ အရေပြားဆဲလ်များကို အကျိုးပြုတဲ့ အင်တီအောက်စီးဒင့် များ စသည့် အရေပြး အကျိုးပြု ဓာတ်တို့ကို ပြည့်ဝစွာ ထောက်ပံပေးခြင်းကြောင့် သင့်အရေပြားကို အရေးအကြောင်း ဖြစ်ခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒါဆို ချင်းမျက်နှာဖုံးနဲ့ ပါးရေ အသားအရေ တွန့်ခြင်းးကို ကာကွယ်ကြပါစို့…..
မကျြနှာ အသားအရညျ တငျးရငျးဖို့ ဂရုစိုကျကွစို့…
တဈခါတဈရံမှာ လူအတျောမြားမြားဟာ မိမိတို့ကိုယျ မိမိတို့ အမှူမဲ့ အမှတျမဲ့ နထေိုငျခွငျးမြားနဲ့ နထေိုငျလေ့ ရှိကွပါတယျ။ အသကျအရှယျ ရလာတဲ့ အခါကမြှ မိမိရဲ့အနအေထိုငျ မဆငျခငျြမူကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာရတဲ့ အလှဖကျြ ဆိုးကြိုးတှကေို ရရှိလာပါမှ နောငျတ ရနတေတျလေ့ ရှိကွပါတယျ။
အသကျအရှယျ ရလာသညျ့တိုငျ သငျ့ မကျြနှာပွငျ အရပွေားမြား တငျးတငျး ရငျးရငျးနဲ့ နုပြိုလှပ နခေငျြပါသလား ???
ဒါဆိုရငျ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ… ပွောပွ ပေးဖို့က စာရေးသူရဲ့ တာဝနျ… လိုကျနာ ကငျြ့သုံးဖို့က စာဖတျသူရဲ့ တာဝနျပါ။
အရပွေား တှနျ့ခွငျးနဲ့ ”ခငျြး” အာနိသငျ
ခငျြးကို မကျြနှာပွငျ အရေးအကွောငျးမြား သကျသာ ပြောကျကငျးရနျ ခငျြး မကျြနှာဖုံး ပွုလုပျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ခငျြးနဲ့အတူ အထောကျအကူပွု ပစ်စညျးတှကေတော့ နာနတျသီး အရညျ ၊ ကွကျဥ အကာတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
နာနတျသီး အရညျကို ထမငျးစားဇှနျး နှဈဇှနျး ခွဈထားသညျ့ ခငျြး (ဂငျြး) ထမငျးစားဇှနျး နှဈဇှနျး
ကွကျဥတဈလုံး၏ အကာရညျ၊ ပြားရညျ လကျဘကျစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ အထကျဖျောပွပါ ပစ်စညျးမြား အားလုံးကို ကွိတျစကျဖွငျ့ ညကျညကျကလေး ဖွဈသှားစရေနျ ကွိတျခမြှေပေေးပါ။ တဈမိနဈ နှဈမိနဈခနျ့ ကွာအောငျ ကွိတျလိုကျသညျ့အခါ အားလုံး ရောနှော ကွညေကျသှားပါလိမျ့မညျ။
ထို့နောကျ ဤကွိတျခထြေားသညျ့ အရညျ ပဈြပဈြကို လကျဖွငျ့ယူ၍ မကျြနှာပျေါသို့ တငျပါ။ မကျြနှာပွငျတှငျ ပှတျသုတျလိမျးပွီး မကျြနှာပွငျအား လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ စကျဝိုငျးသဏ်ဍာနျ လှညျ့ပတျပွီး ခပျဖှဖှ နှိပျနယျပါ။
အရေးအကွောငျး အဖွဈမြားသညျ့ နရောသို့ ပိုမို၍ အလေးထား ပှတျလိမျးပေးပါ။ ထို့နောကျ မကျြနှာဖုံးသဘှယျ တငျပွီး ဆယျ့ငါးမိနဈ မိနဈနှဈဆယျကွာ ထားပေးပါ။ ပွီးလြှငျ ရနှေေးနှေးထဲမှာ စိမျထားတဲ့ ပိတျစနဲ့ မကျြနှာပျေါရှိ မကျြနှာဖုံးကို စငျသှားအောငျ သုတျဖယျပေးပါ။
ဤကဲ့သို့ နစေ့ဉျ မကျြနှာဖုံးကို ဆယျ့ငါးမိနဈ မိနဈနှဈဆယျကွာ ထားခွငျးကို ၇ ရကျခနျ့ ဆကျလုပျပေးပါ။ ၅ ပတျမှ ၆ ပတျအတှငျး အကြိုးထူးကို သိသိသာသာ မွငျတှလေ့ာရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခငျြးမှာပါဝငျတဲ့ ထူးခွားသော အဆီမြား၊ shoadနှငျ့ gingerol အငျဇိုငျးမြား၊ ဗီတာမငျ A, C, E မြာ၊း သှေးလညျပတျမှူကို အားဖွညျ့ပေးသညျ့ ကိုလာဂငျြနှငျ့ elastin ထုတျလုပျမှူကို အားကောငျးစသေညျ့ သံဓျာနှငျ့ မဂ်ဂနီစီယမျ သတ်ထုဓာတျမြား အရပွေားဆဲလျမြားကို အကြိုးပွုတဲ့ အငျတီအောကျစီးဒငျ့ မြား စသညျ့ အရပွေး အကြိုးပွု ဓာတျတို့ကို ပွညျ့ဝစှာ ထောကျပံပေးခွငျးကွောငျ့ သငျ့အရပွေားကို အရေးအကွောငျး ဖွဈခွငျးမြားမှ ကာကှယျပေးနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။
ကဲဒါဆို ခငျြးမကျြနှာဖုံးနဲ့ ပါးရေ အသားအရေ တှနျ့ခွငျးးကို ကာကှယျကွပါစို့…..